Nosy Vanilla manompo ny Vaomieran'ny fizahantany afrikanina
Home » Travel Associations News » Nosy Vanilla manompo ny Vaomieran'ny fizahantany afrikanina
Faly ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) fa nanambara ny fanendrena an'i Pascal Viroleau, CEO an'ny Organisation Vanilla Islands, izay misy an'i Comoro, Madagascar, Maurice, Mayotte, Reunion, ary Seychelles, ho ao amin'ny Birao. Izy dia ho mpikambana ao amin'ny Biraon'ny minisitra mipetraka sy tompon'andraikitra voatendry ho an'ny daholobe.
Pascal Viroleau dia nilaza fa ny tanjon'ny fikambanana Vanilla Islands dia ny fametrahana ny faritry ny Ranomasimbe Indianina ho fialantsasatra maneran-tany tsara kalitao izay manome fahasamihafana tsy manam-paharoa ary iray amin'ireo sisintany farany amin'ny fizahan-tany maharitra.
Ny andraikiny dia ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo orinasam-pizahantany sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hanomezana azy ireo fahaiza-manao sy drafitra asa iraisana hanatsarana ny fahombiazan'ny fisarihana mpitsidika any amin'ny faritany amin'ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa miaraka amin'ireo firenena mpikambana tsirairay. fotodrafitrasa fampiroboroboana ny fizahan-tany.
Ny fikambanana Vanilla Islands dia mikasa ny hampiroborobo ny fifanajana, ny fiaraha-miasa, ny fifamenoana ary ny “joie de vivre” eo amin'ireo fanjakana mpikambana mba hampiroboroboana tsara kokoa ny faritra amin'ny firaisankina amin'ny elo iray. Amin'ny fanatanterahana ireo iraka samihafa, ny fikambanana dia hiasa miaraka amin'ny firafitry ny fizahan-tany misy ny fanjakana mpikambana tsirairay.
Ny fikambanana dia mikendry ny hampiroborobo ny mari-pahaizana kalitao iraisana sy ny fanao mahazatra izay mitaky fiofanana sy fifanakalozana eo amin'ny mpandraharaha sy ny mpiara-miasa mba hanatsarana ny haavon'ny sy ny fenitra miaraka amin'ny synergy amin'ny fomba fanao mahazatra mikendry ny hampitsimoka ny elanelana sy ny fanatsarana ny fenitra no tanjona voalohany mitaky maika. tsara.
Etiopia dia mandefa visa amin'ny fahatongavany ho an'ny Afrikana rehetra
Manatevin-daharana ny Birao Fizahan-tany Afrikanina ny Birao Fampandrosoana an'i Rwanda